Blog – AMA (Aye Myanmar Association)
AMA (Aye Myanmar Association)
Job announcement for project manager post
Posted on September 5, 2018 September 5, 2018 by amamyanmar
အေးမြန်မာလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ တွင်တာဝန်ထောင်ဆောင်ရန် ၀န်ထမ်းအလိုရှိပါသည်။ (1) Project Manager (1) Post ￼ JOB SUMMARY လိင်လုပ်သား (sex workers) များ၏ လူမှုဖွင့်ဖြိုးရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ဝင်စားသူ၊ စိတ်အားထက်သန်သူ၊ ရည်မှန်းချက်မြင့်မားသူ မန်နေဂျာတစ်ဦးအလိုရှိသည်။ ၀န်းထမ်းများးရဲ့ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အပါတ်စဉ်၊ လစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် community (လူထု) အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အဖွဲ့အစည်းမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက်များပြည့်မှီအောင်အထူး ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ JOB DUTIES - တိုးတက်အောင်မြင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုအတွက် ၀န်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ခန့်အပ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ တွေးခေါ်မေမျှာ်မြင်မှုနှင့်အတူ သင်ကြားညွှန်ကြားခြင်း၊ စည်းကမ်းများလိုက်နာစေခြင်းတို့ကိုိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီး ၀န်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအထိ … Continue reading Job announcement for project manager post
Posted on September 4, 2018 September 4, 2018 by amamyanmar
အေးမြန်မာလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့ တွင်တာဝန်ထောင်ဆောင်ရန် ၀န်ထမ်းအလိုရှိပါသည်။ (1) Project Manager (1) Post ￼ JOB SUMMARY လိင်လုပ်သား (sex workers) များ၏ လူမှုဖွင့်ဖြိုးရေးနှင့် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ၀န်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများနှင့် လူထုအကျိုးပြု လုပ်ငန်းများတွင် စိတ်ဝင်စားသူ၊ စိတ်အားထက်သန်သူ၊ ရည်မှန်းချက်မြင့်မားသူ မန်နေဂျာတစ်ဦးအလိုရှိသည်။၀န်းထမ်းများးရဲ့ နေ့စဉ် လုပ်ဆောင်ချက်များ၊ အပါတ်စဉ်၊ လစဉ်ဆောင်ရွက်မှုများအပေါ် စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ အဖွဲ့အစည်းနှင့် community (လူထု) အကျိုးပြု လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ အဖွဲ့အစည်းမှ ချမှတ်ထားသော မူဝါဒများ၊ ရည်မှန်းချက်များပြည့်မှီအောင်အထူး ကြိုးစားဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ￼ JOB DUTIES - တိုးတက်အောင်မြင်သော စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်မှုအတွက် ၀န်ထမ်းများ ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ခန့်အပ်ခြင်း၊ ရွေးချယ်ခြင်း၊ တွေးခေါ်မေမျှာ်မြင်မှုနှင့်အတူ သင်ကြားညွှန်ကြားခြင်း၊ စည်းကမ်းများလိုက်နာစေခြင်းတို့ကိုိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပြီး ၀န်ထမ်းတစ်ဦးချင်းစီအထိ … Continue reading Job announcement for project manager post
Posted on September 3, 2018 September 3, 2018 by amamyanmar
အေးမြန်မာလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုအဖွဲ့တွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် ၀န်ထမ်းခန့်ထားလိုပါသည်။ (1) Admin /HR Assistant Female (1) post - တက္ကသိုလ်တစ်ခုခုမှဘွဲ့ရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။ - HR နှင့်ပတ်သက်သော Certificate ရှိသူဦးစားပေးမည်။ - Admin or HR Assistant လုပ်သက်အနည်းဆုံး(1)နှစ်အထက်ရှိရမည်။ - ရုံးချိန် 9:00 AM to 5:00 PM (Mon – Fri) - Saturday, Sunday နှင့်အစိုးရရုံးပိတ်ရက်များပိတ်ပါသည်။ - လစာ (200,000) MMK အလုပ်လျှောက်ထားလိုသူများသည် အောက်ပါ email လိပ်စာသို့ CV တွင် (ဓာတ်ပုံအပါအ၀င်) အပြည့်အစုံရေးသား ပြီး Microsoft Word File တစ်မျိုးထဲဖြင့်သာ ပေးပို့လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ … Continue reading Job announcement
The Sex Worker Implementation Tool (SWIT) is practical guidance on effective HIV and STI programming for sex workers (Yangon Training)
Posted on August 27, 2018 by amamyanmar
Aye Myanmar Association ဦးဆောင်မှူနဲ့ SWIT Training ပြုလုပ် SWIT ဆိုတာကတော့ လိင်လုပ်သားများအတွက် ပြီးပြည့်စုံသော HIV လမ်းညွှန်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ SWIT Training ကို ရန်ကုန်မြို့ Royal Pavilion Hotel မှာ သြဂုတ်လ ၂၃ ရက်နေ့မှ ဂြုတ်လ ၂၅ရက်နေ့ထိ သုံးရက်တာပြုလုပ်သွားခြ့ပါတယ်။ လိင်လုပ်သားများအတွက် ကျန်းမာရေး၊ ဥပဒေရေးရာများကို ဝန်ဆောင်မှူပေးနေတဲ့ မိတ်ဖတ်အဖွဲ့အစည်းများ တက်ရောက်ရောက်ကြပါတယ်။ နိုင်ငံအတွင်း လိင်လုပ်သားများအကြား ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ အကြမ်းဖက်မှူများ၊ လိင်လုပ်သားများအတွင်းတန်ဖိုးထားမှူနှင့် လိင်လုပ်သားများ၏လုံခြုံစိတ်ချမှူကိုမြှင့်တင်ခြင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများကို ဆွေးနွေးကြပါတယ်။ ဒီ Training ကိုတက်ရောက်လာကြသူတွေရဲ့ မျော်လင့်ချက်၊ Training မှ ရရှိတဲ့ အသိအမြင်တွေနဲ့ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားကြမယ့် ဆန္ဒတွေကို စုစည်းတင်ပြလိုက်ပါတယ်။ https://www.facebook.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F518831108165572%2Fvideos%2F706489353047598%2F&show_text=0&width=560 အေးမြန်မာအဖွဲ့အစည်းရဲ့ လှုပ်ရှားမှုပုံရိပ်တွေကို … Continue reading The Sex Worker Implementation Tool (SWIT) is practical guidance on effective HIV and STI programming for sex workers (Yangon Training)
Organizational Devolpment ခေါင်းစဉ်နဲ့ အေးမြန်မာအဖွဲ့ ရဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
Posted on August 21, 2018 August 21, 2018 by amamyanmar
အေးမြန်မာအဖွဲ့ ရဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကို သြဂုတ်လ (၁၂) ရက်နေ့မှ (၁၅) ရက်နေ့ထိ ရန်ကုန်မြို့ (၉ ) မိုင်က Royal Pavilion Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ အေးမြန်မာအဖွဲ့ရဲ့ (၅) နှစ်တာမဟာဗျူဟာ စီမံးကိန်းရေးဆွဲခြင်း၊ အေးမြန်မာအဖွဲ့၏ ဖွဲ့စည်းပုံ၊ အုပ်ချုပ်ပုံ ပြန်လည်ရေးဆွဲခြင်း စတဲ့ခေါင်းစဉ်တွေနဲ့ ကျင်းပမှာလဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁၂ . ၈ . ၂၀၁၈) ရက်နေ့ မနေ့ကစတင်ကျင်းပခဲ့ပြီး အဲ့ဒီနေ့မှာတော့ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးချင်းစီရဲ့ အားသာချက်၊ အေးမြန်မာ အဖွဲ့၏ ၀န်ထမ်း၊ စေတနာ့ဝန်ထမ်း၊ မိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်း၊ အဖွဲ့ဝင်များ ဖြစ်ရသည့်အတွက် ဂုဏ်ယူရသည့် အချက်များကို တစ်ဦးချင်းအလိုက် ဆွေးနွေးကြသည်။ လိင်လုပ်သားများ ကွန်ယက်အဖြစ် စတင်ခဲ့သည့် ၂၀၀၉ မှ ၂၀၁၈ အထိ … Continue reading Organizational Devolpment ခေါင်းစဉ်နဲ့ အေးမြန်မာအဖွဲ့ ရဲ့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကျင်းပ
Zero Discrimination Day Event
Posted on April 7, 2017 by amamyanmar
AMA celebrated Zero Discrimination Day Event with the support of UNAIDS on March fifth.
International Condom Day 2017
Posted on March 3, 2017 March 3, 2017 by APNSW
An event was held to celebreate International Condom Day (14th Feb) in Pe0ple's Park, Yangon. AIDS Healthcare Foundation chose Aye Myanmar Association (AMA) to be the co-organizer of this event promoting safer sex.
Posted in NewsTagged International Condom Day
Leadership training at Myitkyeena
Posted on January 18, 2017 January 30, 2017 by amamyanmar
The AMA (Aye Myanmar) led the Leadership Training at Wun Tawp Hotel in Myitkyeena city for3days from 6th to 8th of January in 2017. There had Join the 31 of the CBOs representatives from Myitkyeena, Yangon, Mandalay, Bago, Bamaw, Kyaukpadown and Myeikhtila cities.
Posted in NewsTagged trainingLeaveacomment
Advocacy meeting at National Parliament
Posted on December 23, 2016 December 23, 2016 by APNSW
Aye Myanmar Association participated inathree day meeting at the national Parliament in Naypidaw in December 2016, along with other key population networks in Myanmar.
Posted in Advocacy, NewsTagged access to health services, access to justice, arrests of sex workers, condoms as evidence, decriminalisation, National ParliamentLeaveacomment
Posted on November 26, 2016 December 23, 2016 by amamyanmar
On Thursday 1st Dec 2016, members of AMA took part ina"Hands up for HIV prevention" event in People's Park, Yangon. Several hundred members of organizations working in HIV response in Myanmar took part in sharing information about their work with each other and members of the public.
Posted in News, UncategorizedTagged Hands up for HIV prevention, World Aids Day, YangonLeaveacomment
AMA office location
No. 1269, 4th floor, Thuzitar 4th Street, North Okkalapa Township, Yangon, Myanmar. 16.877083, 96.157972